May 21, 2019 Xafiiska Puntland Faallooyinka, Somalia, Wararka Maanta 4
Labo nin baa isu booteyneysay in eey wada dagaalaanto.
Mid baa waxuu yiri Wallaahi sankaada taabana.
Kii kale ayaa yir wallaahi in aadan taaban karin.
kii koowaad ayaa haddana ku celiyay war in aan sanka kaa taabto ayaan kaa jiidaa ilaa aan kaa xanuunjiyo.
Markaasa kii kale haddana ku celiyay war hadii ee hooyada ragnimo kuugu dhashay waakaas bal sankeyga taabo.
Markaasaa kii koowaad yiri war orodoo naga taq doqon yahoow bal maanta dhan ma sankaada kuwada murmeenaa.
Maanta dowladda Kenya waxaa laga cel celinayaa sanka ku yaal Soomaaliya.
Kismaayo, Shidaalka Soomaaliya, Badda Soomaaliya kulli waa xoolahii dhulkii, baddii Soomaaliya.
Maanta Soomaaliya waa doqonkii sankiisa lagu wada murmaayo.
Aaaway Madax ku sheegi, Aaway dowlad ku sheegtii, Aaway Maamul Goboleedkii, Aaway Baarlamaan ku sheegii
Allow Tuugada Soomaaliyeed, tuugada Kambaniyaasha Shidaalka, Cadowga Kenya, Cadowga Ethiopia ka qabo ummaddada dayacan.
War ducada badiya Bil Ramadaan ayaa lagu jiraa in uu ilaahay farji khayr qabo in uummaddaaan u sahlo. Aamiin
CAALAMKA OO LAYAABAN IN SOOMAALIYA DAWLAD WANAAGA KAGA HORAYSO AFRIKA IYO AASIYA?….. MAANTA?..
Wadamada afrika waxaa ka jira dawlado hanaankooda dawladnimo ay ku salaysantahay raadkii gumaysigii soomaray qaarada.Waxaa u noqday fure iyo wado la raaco nidaamyadii maamul ee waayo hore dunidu ku dhaqmaysay gaar ahaan reer yurubku. Qaababka kaligii talisnimo iyo nidaam aan furfurnayn ayaa gumaysigu uuga tagay afrika oo ay ilaa maanta ku dhaqmaan. waxaa nasiib dara ah in qaababkaa dunidu ka gudubtay oo xiliyo fog laga baxay.(U DANQO DALKA)(U JIIR NAX JIRITAANKAG MUQADAS KA AH?..)
Waa tee Dawlada wanaagsan ee Soomaaliya ka jirtaa. Ma ta Doqonka Farmaajo ee aanan meelnaba u socon hor joogaa?
Farmaajo Soomaali oo dhan ayuu ceebeeyay, waayo Kenya oonan weligeed Soomaaliya isku taagin ayaa maanta say doonto ula macaamileysa Dawlada Farmaajo. Jubooyinka say doonaan ayay ka yeelaan. Axmed Madoobe iyaga ayaa dabada kasoo riixaya. Safiirkii Soomaaliya ayay si qeyral masuulnimo ah usoo eryeen, weliba si bilaa sabab ah. Rakaabkii Soomaalida ayay Garoon kale ku baadhaan. Uhuru xitaa Isagoo Farmaajo la heshiiyay ayuu hadana wiigii ku xigay fal ka gedisan heshiinkii sameeyay isagoon xitaa sababeyn ama cudurdaar noocuu doonaba ha ahaadee ka bixin. Imikana xildhibaanadii iyo wasiiradii Soomaalida ee Baasaboorada Diblomaasiga ah watay ayay tacadiyo aanan munaasib aheyn kula kacaysaa Keynyi.
Waxaas oo dhana waxa sabab u ah Taag iyo Tabar darida Soomaaliya. Soomaaliya markii horeba taag iyo Tabar midna ma laheyne waxa soo kordhay waa Farmaajo. Farmaajo waa Madaxweyne intii Soomaaliya soo martay kii ugu liitay. Liidnimo wax ka xunina ma jirto. Dadka qaarbaa ku andacooda waa daacad. Inkasta oonan anigu is laheyn Farmaajo waa daacad ama wadani dhab ah, hadana aaban kabasoo qaado inuu daacad yahay. Haduu daacad yahay dee Soomaali badankeedu waa daacad. Daacadnimo wadan dhan kelideed Laguna wadi karo. Waxaa loo baahan yahay waa qofku inuu lahaado khibrad, waayo aragnimo, geesinimo ku dhac, ku dhiirasho, ka dhursugis, ka dheeraan, ka gaabsi, ka fiirsasho iyo in badan oo kaloo ‘ku’ ahi ku dheehantahay. Ta ugu muhiimsana waa in qofku lahaado isku kalsooni. Waxaa intaas dheer in qofka Madaxda ahi uu isku xeero dad daacad ah oo isaga ka khibrad badan oonan haa Madaxweyne uun aheyn, kuwaas oo kala taliya arin walba oo soo wajahda. Xeel dheereyaal shaqada u fudeedaya si ay hadafyafiisu u hirgeli lahaayeen.
Farmaajo waa Madaxweyne intaasba ka madhan oo isku mashquuliya guulo maalmeedyo. Anigu waxaan ka cabsoonayaa in heshiisyadan faraha badan eenay cidina waxba ka ogeyn ay Soomaaliya Dal ahaan iyo Soomaali oo dhan guud ahaan usoo hooyaan dhibaatooyun culus culus oo curyaamisa, fududeysana hadafka cadowgu ku wiiqayo Soomaalida. Weligay Maan arag Madaxweyne iyo Dawladiisa oo heshiis ay soo galeen aanan ka hadal oonan usoo ban dhigin shacabkey masiirkooda majaraha u hayaan.
Baarlamaankii waxa uu ka dhigay mid isaga jeebada ugu jira. Maxkamadii dhexe isaga ayaa marna magacaaba marna xilka ka qaada. Tii Dastuuriga aheyd ee uu balanqaadey muu dhisin. Maamul Goboleedyadii iyaguba sifada guracan ku yimid dagaalbuu kula jiraa. Meel uu wax u wado lama garanayo oo isna malaha af uu ku hadlo oo waa gan’a. Kuwa ku xeeran ee aftahanada ahna xitaa masoo dirsado si ay dadka wax ugu qeexaan.
Marka Farmaajo ficiladiisa la fiirsho Laba gunaanad uunbaa laga gaadhi karaa. Waa ta hore’e, waa qof aanan u qalmin Kursiga ugu sareeya Dalka oonan laheyn caqliyadii, kartidii iyo aqoonteediiba, kana aradan sifo walba oo hogaamiye lagu qiimeeyo iyo ama inuu yahay khaa’in si ula kac ah Soomaaliya u burburinaya oonan wax dan ah ka laheyn mustaqbalkeeda.
Labaduba waxay Soomaaliya iyo Soomaali oo dhan badi doonaan khasaarooyin sida looga soo kabtaa adkaan doonaan.
Illaahaybaase shar kasta laga Magan galaa. Eebaheena na uuntay ayaynu ka magan galeynayaa inuu naga badbaadiyo shirqoolada iyo dabinada ay cadawgu u dhigayaan Soomaaliya iyo Soomali soo dhan gidigeenba.
Xanuunkii Farmaajo ayaa soo noqday aya ila tahay xitaa Ramadaankii wuu daweyn waayey ilaahoow caafimaad buuxa aamiin.waxaa la yaab leh shalay markii ay kuwa hada xildhabaanada sheeganaya ee dacwada ka ah Kenya iyo kuwa maamul goboleedyada xukuma iyo kuwa sheegta xisbiyo mucaaradka ah hade waa 3 asbuuc ka hor ay Kenya wada fadhiyeen iyagoo lahaa dawlada ayaan dacwo ka nahay oo ma rabno in wax la inoogu daro oo beesha caalamka ayaa gacan ku qabaneyso inay RoadMap noo sameyso ayaan rabnaa dhaqaale dambena waa inaan dawladeena la inoogu dhiibin ayaa maanta hadana leh Farmaajo Kenya muu inaga celiyo oo ku xagxaganaya Kenya muxuu ula dagaali waayey ama ula hadli waayey waxaan maqli jiray ilaahayoow Haa iyo Maya ha inaga wada yeersiin mar qura bal ka waran qof leh dawladeyda lugahaan qabanayaa misana ku xagxagnaya may wax iga celiso ummada la jahwareerinayo ayuu hadalkaan ku socdaa ninkii xanuunsan allah caafiyo isagu waa yeelkii.